Ubunewunewu obuzimeleyo estudio sase-Abingdon
Ubunewunewu, isitudiyo esizimeleyo esizimeleyo ngaphezulu kwegaraji yekhaya losapho kwindlela ezolileyo e-Abingdon. Indawo yokupaka enikezelweyo ngaphandle kwesitalato.
Kutshanje ihlaziywe yaya kumgangatho ophezulu kakhulu, kubandakanya ukufudumeza umgangatho ophantsi, igumbi lokuhlambela elinesitayile le-en-suite, indawo yokuhlala epholileyo kunye netafile yokutya/ukusebenzela kuyo. Akukho khitshi, kodwa kukho i-microwave, ifriji, itoaster, iketile kunye nomatshini wekofu we-nespresso kunye neziqhekeza ezimbalwa ezisisiseko. Abamkeli abanobubele bahlala kwindawo kwaye baya kukuvuyela ukunceda.
I-Abingdon yidolophu yentengiso yesiNgesi yakudala, emi phezu komlambo. Umbindi wedolophu umhle ngenene uneholo yedolophu kunye nebhulorho ethandekayo, egcwele i-pub esemlanjeni ngeengokuhlwa zasehlotyeni. Sikufuphi neOxford kwaye sibekwe kakuhle kwiipaki zoshishino ezikufutshane neDiscot, kuquka iMilton Park kunye namaziko esayensi eCulham naseHarwell.
Ndihlala kwisiza kwaye utyekelo lwam lwendalo kukuhlalisana. Kodwa ndiyayihlonipha into yokuba abantu bafuna indawo yabo kwaye ngenxa yokuba istudiyo sinomnyango owahlukileyo, ngokuqhelekileyo akubangakho ncoko ingako ngaphandle kokuba sigilane ngaphandle.
Ndihlala kwisiza kwaye utyekelo lwam lwendalo kukuhlalisana. Kodwa ndiyayihlonipha into yokuba abantu bafuna indawo yabo kwaye ngenxa yokuba istudiyo sinomnyango owahlukileyo, ngok…